Siyavuyisana noMeokon kunye neYunivesithi yaseMzantsi-mpuma ngokusayina isivumelwano sentsebenziswano
I-Shanghai Meokon Sensor Technology Co., Ltd. kunye ne-Cyberspace Security ye-Southeast University zisayine isivumelwano sokusebenzisana sokuseka iziko elidibeneyo le-R & D eNanjing Ngomhla we-13 kuMeyi ka-2021. Ukhuseleko lweCyberspace lwe ...
Uxinzelelo lweMeokon Smart yoMlilo inokuqonda ukujonga esweni kude
Kule mihla, ngokuchazwa okuqhubekayo kwemigaqo-nkqubo yesizwe yokuxhasa, ubungakanani bezicelo zokukhusela umlilo ngokuthe ngcembe ziye zanda zaya kwiindawo ezahlukeneyo, ezinjengeendawo ezincinci ezisithoba, izakhiwo eziphakamileyo, izakhiwo zorhwebo, i-petrochemicals, izikhululo zeenqwelo moya, iipaki zemizi-mveliso nezinye i. ..
Meokon 1 umzuzu "Phonononga": Umsebenzi wokuhambisa iBluetooth wesango elingenazingcingo
Ngophuhliso oluthe kratya lwe-Intanethi yeZinto kunye netekhnoloji yedatha enkulu, kunye nokuphunyezwa okukhawulezileyo kwamakhaya akrelekrele kunye nezixeko ezi-smart, uphando lobuchwephesha kunye nophuhliso kunye nokwenza imveliso kwimizi engenazingcingo nayo iyaqhubeka ukuqhubela phambili. Kule meko, kanye iBluetoo ...
Isidlulisi soxinzelelo olwahlukileyo lwedijithali "lugcwele ukunyaniseka"
Kwiminyaka yakutshanje, imeko yophuhliso lwezoqoqosho kunye netekhnoloji yenze utshintsho olukhulu. Iqhutywa sisizukulwana esitsha setekhnoloji yolwazi kunye netekhnoloji yonxibelelwano, uqoqosho lokwenyani lwelizwe lam liqhubekile ukuphucula ubuchwephesha balo, inethiwekhi ...
I-Shanghai MEOKON 2020 "Iintliziyo ezixineneyo ziyahlangana zenza amandla okuqaqamba, ukuYila kunye nokuLwela" Imisebenzi yeSebe yeNtengiso yokwakha iqela.
Ukulungiselela ukuphucula ubumbano lweqela, unxibelelwano nentsebenziswano; ukuphucula ukuqonda kolwazi ngentsebenziswano esebenzayo kunye nezakhono zonxibelelwano, ukukhuthaza amalungu eqela ukuba ajongane nomceli mngeni, azigqobhoze, enze itephu amandla, kwaye akhulule ukuthanda; yandisa inkcubeko ...
Nge-11 kaNovemba ka-2020, inkqubo yonyaka ye- "Meokon Smart Sensor Scholarship" yabanjwa kwakhona. Le nkqubo yaqaliswa yi-MEOKON SENSOR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD kwaye le nkqubo ikhuthaza iiyunivesithi kwiitalente ze-smart sensor. Eli bhaso lokufunda ...
Siyavuyisana nokuvulwa kwe-Shenzhen MEOKKON
Ngentsasa ka-Disemba 13, inkampani encedisayo yaseShenzhen yeMeokon Sensor Technology (Shanghai) Co, Ltd. yabamba umsitho wokuvula. UMnu Andy, umphathi jikelele we-Shanghai MEOKON, Mnu Qiu, umphathi jikelele weChongqing MEOKON, kunye noMnu Ren, ...
IShanghai Meokon: Umsebenzi weBluetooth “ubalasele”, intle kwaye inamandla okuhambisa uxinzelelo lweBluetooth engenazingcingo
Ngophuhliso olukhawulezileyo lweetekhnoloji ezinqabileyo ezinje nge-Intanethi yeZinto kunye nobukrelekrele bokuzenzela, ulwakhiwo lwezixeko ezifanelekileyo, ukucima imililo ngobuchule, njl. Amacandelo amaninzi anjengeefektri, ukucima umlilo, ukhuselo lokusingqongileyo, iipetrochemicals, njl.